Arin Qasabtay Inuu Gacantiisa Isku toogto Sarkaal ajnabi ah oo ka tirsanaa Al shabaab. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jilib ( Mareeg News ) Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalladda Nairobi ayaa maanta qoray in Maydka Dagaalame Kenyaan ah laga helay meel ku dhow dhismo ay Dagaalamayaasha Ajaaniibta ka deggan yihiin Xero ku taalla magaalladda Jilib.
Meydka dagaalamaha oo ahaa muwaadin u dhashay Kenyaayaa laga helay kaam ku yaala degmadda Jilib ee gobolka Jubadda hoose.
waxaa magaciis waxaa lagu sheegay Abdi Kimani, waxaana laga helay dhabarka dambe ee guri ay dagan yihiin Ajaanibta dhawaan loo qoray in ay Al-shabaab u dagaalamaan, sida uu qoray Wargeeska The Star ee Kenya.
Warar ayaa sheegaya in Kimani uu isagu is dilay kadib sadax todobaad oo uu ku jiray xeradda cusub. “Kimani wuxuu noqday kii sadaxaad ee Dagaalameyaal shisheeye oo shan ah oo isdilay, waxaana jira tiro aan la aqoon inta ay la egtahay oo baxsaday” ayaa laga soo xigtay ilo wareed aan magacooda la shaacin.
Xaalad Adag oo nololeed ayaa la sheegay in ay wajahaan dagaalameyaasha Al-shabaab ay soo qortaan taas oo ka duwan middii ay filayeen. “kuwa hadda kusoo biiray ururka ayaa ah kuwa ugu badan ee nolosha adag saameeyso xilligaan oo Al-shabaab ay la kulmayaan caqabado ay ka mid tahay daadad iyo cuduradda biyaha ka dhasha” ayaa sidoo kale laga soo xigtay isha aan la shaacin.
Dhinaca kale, aBoqolaal Dagaalyahano Kenyan ah ayaa ka tirsan Xarakadda Alshabaab, kuwaasi oo badankooda ka hawl-gala Goballadda Jubbooyinka iyo gudaha dalkaasi.
Inta badan Dagaalamayaasha Kenyaanka ayaa la tilmaamay inay ka tirsan yihiin Ciiddanka Jeysh Ayman oo ka tirsan Xarakadda Alshabaab.